Sarkaal sare oo ka tirsan Alshabab oo qirtay guul-darro; khasaaraha dagaalka oo sii badanaya iyo goobo horleh oo dagaalku ku fidayo. – Radio Daljir
Muqdisho, May 24 – Sarkaal sare oo u hadlay xarakada Alshabab ayaa markii ugu horaysay qiray in kooxdiisa looga awood roonaaday dagaallo Muqdisho ka socday saddexdii maalmood ee la soo dhaafay.
Sheekh Xasan Daahir Aways oo xilli sii horeeyay ku biiray xarakada Alshabab, kana mid ah hogaamiyayaasha dagaalka ayaa goor dhawayd saxaafadda kula hadlay agagaarka suuqa Bakhaaraha ee degmada Hodan, wuxuuna sheegay in dagaalka looga xoog-roonaaday kooxdiisa. Si kastaba ha ahaatee waxa uu intaa ku daray in ay kooxdiisu dagaalka sii wadi doonto.
Waa maalintii saddexaad oo dagaal kharaari suuqa Bakaaraha ku dhex-marayo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo kuwa kooxda Alshabab. Wararka laga helayo shaqaalaha gurmadaka caafimaadka deg-degga ah ayaa sheegaya in dagaallada socda ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 30 qof halka 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawaca ah ayaa lagu daweeynayaa isbitaallada magaalada Muqdisho.
Afhayeen u hadlay ciidamada AMISOM ayaa isaguna saxaafadda u sheegay in ay gacanta ku dhigeen maxaabiis afar ah oo ka tirsan dagaal-yahannada kooxda Alshabab, wuxuna ugu baaqay afhayeenku dhallinyarada u dagaallamaysa kooxda Alshabab in si fiican loola dhaqmi-doono haddii ay isa soo dhiibaan.
Wasiiru dawlaha xukuumadda federaalka KMG ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Abtidoon ayaa shalay u sheegay Radio Daljir in ay dawladdu laba maalmood gudahood ku gali doonto suuqa Bakaaraha oo ah goob ay aad ugu xoog-badan tahay kooxda Alshabab. Mas’uuliyiinta dawladda iyo saraakiisha AMISOM ba waxa ay baaqyo badan u jeediyeen in ganacsatada suuqa Bakhaaraha, oo ah kan ugu wayn suuqyada Geeska Afrika, ay la shaqeeyaan dawladda, gacanna ka gaystaan sidii kooxda Alshabab looga saari lahaa suuqaas.
Dhinaca kalena, dagaallada ayaa la filayaa in ay ku sii faafaan goobo kale oo ka mida xaafadaha magaalada Muqdisho iyada oo shalay iyo maantaba la arkayay dawladda oo ciidamo ku sii daabulaysa xaafadaha Boondheere iyo Shibis ee waqooyiga Muqdisho.
Dagaallada ka socda magaalada Muqdisho iyo gobollo kale oo dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa si isa soo taraysa waxa loogu jabinayay kooxda Alshabab ee dagaalka adag kula jidha ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya. Kooxda Alshabab ayaa laga saaray goobo badan oo ka mida magaalada Muqdisho, goobo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo inta badan gobolka Gedo ee koonfur-galbeed Soomaaliya.
Guulahan ayaa kor u qaaday miisaanka siyaasadeed ee maamulka Shariif Sh. Axmed iyo xukuumaddiisa uu hogaamiyo ra’iisul-wasaare Farmaajo. Marka dhan la iska dhigo guulaha ammaan ee ay soo xasilisay dawladda Shariif, ayuu haddana waxa culays siyaasadeed oo aad u badan ka haystaa rafiiqiisii hore, afhayeenka barlamaanka Shariif Xasan Sh. Aden oo isagu ku doodaya in madaxda hay’adaha federaalku u soo joogsadaan doorasho marka uu dhamaado jiritaankooda sharciga ah oo ku aaddan 20-ka bisha August ee sannadkan 2011-ka.
Cabdullaahi Maxamed Cali iyo diiwaanka wararka